Dhaabbanti Al-basar International Foundation jedhamu hospitaala wal’aansa ijaa 11 Ityoophiyaa keessatti ijaaruuf tahuu gabaafame - NuuralHudaa
Dhaabbanti Al-basar International Foundation jedhamu hospitaala wal’aansa ijaa 11 Ityoophiyaa keessatti ijaaruuf tahuu gabaafame
Hoggantoonni dhaabbatni deeggarsaa Al Basar International Foundation guyyaa hardha waajjiira mana marii dhimmoota Islaamaa Ityoophiyaatti argamuun hoggantoota mana marichaa waliin kan mari’atan yoo tahu, marii kana irratti pirojektoota dhaabbatichi Ityoophiyaa keessatti ijaaruuf karoorfate ifa godhanii jiru. Haaluma kanaan dhaabbatichi waggaa kudhan keessatti hospitaalota wal’aansa ijaa fi wiirtuulee leenjii 11 doolaara miiliyoona dhibba lamaatiin ijaaruuf tahuu ibsame.
Hospitaalaa fi wirtuulee ijaaraman jidduu tokko kolleejjii Awwaliyaa kan mana marii walii galaa dhimmoota Islaamaa jalatti argamuu kan kennamu tahuus beekameera.
Dhaabbatni kun kanaan dura marsaa 17 ogeeyyota gara Ityoophiyaa erguun yaala ijaa kan kennaa ture yoo ta’u, waggaa 13 keessatti lammilee biyyatti 200,000 oliif tajaajila wal’aansa ijaa fi deeggarsa adda addaa loogi tokko malee kan kennaa ture tahuu beeksise.
Namoota dhaabbatichi wal’aansa ijaa kenneef jidduu 20,000 kan fayyaan yoo tahu, namoota 40,000 immoo kiyyootu (eye glass) kennameef. Akkasumas namoota 100,000 ol tahaniif immoo dawaan kaffaltii tokko malee kan keennameef tahuu beekameera.